खोपको ‘प्रि-अर्डर’ मै अलमल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
खोपको ‘प्रि-अर्डर’ मै अलमल
सरकार कोभाक्स सुविधामै भरपर्दा कोरोनाविरूद्धको खोप ल्याउन अझै ढिलाइ हुने भएको छ ।
पुस २५, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — अधिकांश देशले कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनीसँग ‘प्रि–अर्डर’ गरिसकेका छन् । कतिपयले त खोप लगाउनै सुरु गरिसके । नेपालले भने अझैसम्म प्रि–अर्डर नगर्दा समयमै खोप आउनेमा शंका उब्जिएको छ । नेपाल सरकार कोभाक्स सुविधाकै पर्खाइमा रहँदा खोप आउन ढिलाइ हुने देखिएको हो ।
कोरोनाको सम्भावित दोस्रो लहरसँग जुध्नसमेत खोप प्रमुख हतियारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने भएकाले समयमै सुनिश्चित नगरे स्थिति जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । छिमेकी भारतमा बेलायतले स्वीकृति दिएको अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिका खोप उत्पादन भए पनि नेपालले प्रि–अर्डर गरेको छैन ।
सरकार भने कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि सहुलियत दरमा प्राप्त हुने भनिएको ‘कोभाक्स सुविधा’ अन्तर्गतको खोपमै भर परेको छ । उक्त खोप पनि चार महिनाको अवधिमा पहिलो चरणमा करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुग्ने गरी आउनेछ । ‘हाल खोप लगाउन थालेका अन्य मुलुकझैं नेपालले समेत समयमै खोप उपलब्धताका लागि उत्पादक कम्पनीसँग पहिल्यै प्रि–अर्डर गर्नुपर्थ्यो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘सरकार भने कोभाक्स सुविधाबाट आउने खोपमै दौडधुप गरिरहेको छ ।’
खोप भित्र्याउन उत्पादक मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद पनि उत्तिकै जरुरी हुने बताउँछन्, वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त । ‘खोप बजारमा उपलब्ध हुनासाथ तुरुन्त ल्याउँछौं भन्नु गफमात्रै हो । कोभाक्स सुविधाबाट आउन पनि त्यति सहज छैन,’ उनले भने, ‘खोप उत्पादन गर्ने देशले समेत अर्को देशबाट किनेर खोप ल्याइरहेका छन् ।’ खोप लगाउन सुरु गरेका मुलुकहरूले उत्पादक कम्पनी र सरकारसँग प्रि–अर्डर गरेर समयमै खोप सुनिश्चित गरेका छन् । यतिसम्म कि क्लिनिकल ट्रायलको परिणामभन्दा अघि नै खोपका लागि प्रि–अर्डर भइरहेको छ । ‘पश्चिमा मुलुकको कुरा छाडौं, छिमेकी भारतले एक महिनाअघि नै करिब १६० करोड मात्रा खोपको प्रि–अर्डर गरिसकेको छ,’ ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले कस्तो प्रकारको खोपका लागि प्रि–अर्डर गर्ने भन्नेबारे अब अन्योल नरहेको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद्ले खोपका लागि तोकेको प्राथमिकता गाइडलाइन हुन सक्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले खोपका लागि तोकेको प्राथमिकतामा गुणस्तरीय (सुरक्षित र प्रभावकारी) हुनुपर्ने, चिस्यान–भण्डारणलगायत पूर्वाधारसँग अनुकूल हुनुपर्ने, उपलब्धता र कम लागत मुख्य रहेका छन् ।
सरकारले खोप लगाउन प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । पहिलो चरणको खोप लगाउने प्रयोजनका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको विवरण माग गरिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त विवरण बाल स्वास्थ्य एवं खोप शाखामा इमेलमार्फत पठाउन भनेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोभाक्स सुविधाबाट पहिलो चरणअन्तर्गत ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आउने भनिएको खोपलाई नै लक्षित गरी विवरण मागिएको हो । कोभाक्स सुविधाको खोप आउँदो मार्चभित्र आउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७७ ०६:३१
राजमार्गमा नगरपालिकाको नाममा जथाभावी कर असुली
पुस २४, २०७७ टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछाप — तराईका जिल्लाबाट व्यापारिक सामान लिएर बीपी राजमार्गमा आउने सवारी साधनलाई सिन्धुलीगढीमा रोकेर नगरपालिकाको नाममा जबरजस्ती कर असुलेको भन्दै रामेछापका व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
कमलामाई नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनमा कर दस्तुर संकलनका लागि लगाएको ठेक्कामा कानुनविपरीत तराईका उद्योगबाट उत्पादित मालसामान बोकेर आउने ढुवानी साधनसँग कर असुल्ने गरिएको छ । चिनी, तेल, दाल, इँटालगायतका सामग्रीमा नगरपालिकाको नाममा मनलागी कर उठाउने गरिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
कानुनबमोजिम स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीको सोही पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले कर दस्तुर असुल गर्न पाउँदैनन । त्यसमाथि उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको भ्याटलगायतका दस्तुर तिरेर ढुवानी गर्दा बीचमा कुनै कर लाग्दैन । लिन पाइँदैन ।
बिहीबार राति साढे १० बजे धनुषाबाट चिनी बोकेर रामेछाप जाँदै गरेको ट्रक गढीमा (सोला भन्ज्याङ्ग) मा रोकियो । कमलामाई नगरपालिकासँग स्थानीय वस्तुको कर दस्तुर असुलीका लागि ठेक्का पाएको इम्यानुयल कन्स्ट्रक्सनका केही युवाले गाडी चालक लिला भुजेललाई के ल्याएको ? भनेर सोधे । चालकले चिनी ल्याएको उत्तर दिए । त्यतिमात्र हैन उनले चिनीको बिलसमेत देखाए । ती युवाले उनलाई छोडेनन्, गाडीको ढोका हाने, त्रिपाल उठाउन थाले अनि पछि दाउराले चालक भुजेलको अनुहारमा हाने । रगत बग्न थालेपछि भुजेलले गाडी कुदाए र ज्यान बचाए ।
‘मलाई मार्ने रहेछन्’, भुजेल भन्छन् – 'रातको समय थियो, म गाडीमा एक्लै थिएँ, उनीहरु २० जना जति थिए ।' उनले गढीबाट मन्थली आउन्जेलसम्म रगत बगेको सुनाए । उनले बिहीबार रातिको घटना विवरणसहित शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा जाहेरी दर्ता गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । व्यवसायीहरुले शुक्रबार रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर तत्काल समस्या समाधान नभएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विशकसेन ढकाल सिन्धुलीगढीमा उठाउने करको विषयमा यसअघि पनि पटक-पटक गुनासो आएको बताउँछन् । ‘हामीले कुन सामग्रीमा कर लिन पाउने भन्ने कुराको विवरणसहित ठेकेदारलाई दिएका छौं, लिस्ट टाँस्नुस् भनेका छौं ’, ढकाल भन्छन्, ‘यो भन्दा बढी के भनौं । उनले ठेकेदारका तर्फबाट कर असुल्न खटाइएका युवाले मनलागी कर असुलेको कुरा यसअघि पनि सुनेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको ध्यानाकर्षण भइसकेको बताए ।
नगरपालिकासँग स्थानीय वस्तुको सेवा कर संकलनका लागि ठेक्का पाएको इम्यानुयल कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाईटर छत्र बम्जनले बिहीबार रातिको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरे ।
रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद घिमिरेले रामेछापका व्यवसायीले यसअघि पनि सिन्धुलीको गढीमा भएको जथाभावी कर असुलप्रति खनियाखर्क प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएको बताए । उनले रामेछापतर्फ आउने सबै साधन ठगिएको बताए ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७७ २१:५४